DeltaCredits စျေး - အွန်လိုင်း DCRE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DeltaCredits (DCRE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DeltaCredits (DCRE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DeltaCredits ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DeltaCredits တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DeltaCredits များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DeltaCreditsDCRE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0307DeltaCreditsDCRE သို့ ယူရိုEUR€0.0259DeltaCreditsDCRE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0235DeltaCreditsDCRE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0279DeltaCreditsDCRE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.273DeltaCreditsDCRE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.193DeltaCreditsDCRE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.676DeltaCreditsDCRE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.114DeltaCreditsDCRE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0407DeltaCreditsDCRE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0428DeltaCreditsDCRE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.676DeltaCreditsDCRE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.238DeltaCreditsDCRE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.167DeltaCreditsDCRE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.3DeltaCreditsDCRE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.19DeltaCreditsDCRE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0421DeltaCreditsDCRE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.047DeltaCreditsDCRE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.956DeltaCreditsDCRE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.213DeltaCreditsDCRE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.27DeltaCreditsDCRE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩36.46DeltaCreditsDCRE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.86DeltaCreditsDCRE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.24DeltaCreditsDCRE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.84
DeltaCreditsDCRE သို့ BitcoinBTC0.000003 DeltaCreditsDCRE သို့ EthereumETH0.00008 DeltaCreditsDCRE သို့ LitecoinLTC0.000565 DeltaCreditsDCRE သို့ DigitalCashDASH0.000338 DeltaCreditsDCRE သို့ MoneroXMR0.000345 DeltaCreditsDCRE သို့ NxtNXT2.4 DeltaCreditsDCRE သို့ Ethereum ClassicETC0.00453 DeltaCreditsDCRE သို့ DogecoinDOGE8.86 DeltaCreditsDCRE သို့ ZCashZEC0.000373 DeltaCreditsDCRE သို့ BitsharesBTS0.946 DeltaCreditsDCRE သို့ DigiByteDGB0.983 DeltaCreditsDCRE သို့ RippleXRP0.109 DeltaCreditsDCRE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00106 DeltaCreditsDCRE သို့ PeerCoinPPC0.102 DeltaCreditsDCRE သို့ CraigsCoinCRAIG14 DeltaCreditsDCRE သို့ BitstakeXBS1.31 DeltaCreditsDCRE သို့ PayCoinXPY0.536 DeltaCreditsDCRE သို့ ProsperCoinPRC3.85 DeltaCreditsDCRE သို့ YbCoinYBC0.00002 DeltaCreditsDCRE သို့ DarkKushDANK9.86 DeltaCreditsDCRE သို့ GiveCoinGIVE66.53 DeltaCreditsDCRE သို့ KoboCoinKOBO7 DeltaCreditsDCRE သို့ DarkTokenDT0.0283 DeltaCreditsDCRE သို့ CETUS CoinCETI88.72
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 19:35:02 +0000.